Black Magic: စားစရာမရှိက Wendy’s က အလကားကျွေးသည်
စားစရာမရှိက Wendy’s က အလကားကျွေးသည်
Posted by Black Magic | Posted in ထူးထူးခြားခြား | Posted on 12:32 PM
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ KFC တုိ့လိုပဲ အောင်မြင်နေတဲ့ အစားအစာ Brand တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူ့ကို Wendy’s လို့ အမည်ရပါတယ်။ သူ့က ဟမ်ဘာကာကို ပိုပြီးတော့ အဓိကထားတဲ့ Fast Food ဆိုင်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ခွဲကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။
သူ့မှာ ပေါ်လစီ တစ်ခု ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကတော့ အစားအသောက် အလကားကျွေးဖို့ပါ။ “ဒီနေရာဒေသမှ မဟုတ်၊ ဗိုက်ကလည်းဆာ၊ စားစရာလည်း မရှိ” ယင်း အချက် ၃ ချက် ပြည့်စုံရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို လုံလောက်တဲ့ အစားအသောက် ကို အလကား ကျွေးစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ "I'm not from this area. I'm lost & don't have money! လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အစားအသောက်များ အလကားပေးဖို့၊ ကျွေးမွေးဖို့ ပေါ်လစီ ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Customer များအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုကောင်း ပေးပြီး၊ အလှူအဒါန်း ရက်ရောမှုကြောင့် Wendy’s ဟာ ပိုလို့ အောင်မြင်လာကြောင်း သိရပါတယ်။